मैत्रीपूर्ण क्रिक्रेट प्रतियोगिता बिरगंजमा सम्पन्न , २ रनको अन्तरालले पर्सा प्रहरी टिम बिजयी । – PraharDailyNews
Home/खेलकुद/मैत्रीपूर्ण क्रिक्रेट प्रतियोगिता बिरगंजमा सम्पन्न , २ रनको अन्तरालले पर्सा प्रहरी टिम बिजयी ।
मैत्रीपूर्ण क्रिक्रेट प्रतियोगिता बिरगंजमा सम्पन्न , २ रनको अन्तरालले पर्सा प्रहरी टिम बिजयी ।
प्रहार डेली न्यूज २०७८, १३ कार्तिक शनिबार १८:२७
बिरगंज , कार्तिक १३ गते शनिबार ।
दिपावलि तथा छठ पर्वको अवसरमा सुभकामना आदानप्रदानका साथै मैत्रीपूर्ण क्रिक्रेट प्रतियोगिता सम्पन्न भएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साको खेल मैदानमा भएको समुदाय – प्रहरी साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत २ नम्बर प्रदेश विपद व्यवस्थापन गुल्म वीरगञ्ज र ग्रिनसिटी सामुदायिक सेवा केन्द्र तथा ग्रिनसिटी सामुदायिक प्रहरी सेवा केन्द्र आदर्शनगरको सयुँक्त आयोजनामा क्रिकेट प्रतियोगिता सम्पन्न भएको थियो ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक बेलबहादुर पाण्डे र वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष डा. सुवोध कुमार गुप्ताले बलिंग र ब्याटिंग गरेर प्रतियोगिताको उद्घघाटन गरेका थिए । मैत्रीपुर्ण क्रिकेट प्रतियोगितामा सामाजिक संघ संस्थाहरुलाई २ विकेटले पराजित गर्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालय र २ नम्बर प्रदेश विपद व्यवस्थापन गुल्मको टोली विजयी भएको छ ।
प्रतियोगितामा विजयीलाई ट्रफी, मेडल र जर्सी र उपविजेतालाई मेडल र जर्सी प्रदान गरिएको थियो । कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष डा. गुप्ताले मैत्रीपुर्ण खेलले मित्रतासँगै आपसी सहिष्णुता बृद्धि गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । आगामी दिनमा पनि अँझै सामाजिक मेलमिलाप र सुमधुर सम्बन्धका लागि यस्ता प्रतियोगिताहरुको आयोजना हुनुपर्नेमा गुप्ताले जोड दिए ।
कार्यक्रममा पर्साका प्रमुख सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक राजेन्द्र खड्काले खेलले सम्बन्ध सुधारसँगै स्वास्थ्यमा पनि सुधार गर्ने बताए । स्वस्थ र तन्दुरुस्त हुनका लागि पनि खेल खेल्नुपर्ने आवश्यक्ता खड्काले औँल्याए ।
कार्यक्रममा प्रहरी नायव उपरीक्षक प्रलाहद कार्की, प्रमुख ट्राफिक प्रहरी निरीक्षक सुमन कार्की, विपद व्यवस्थापन गुल्मका प्रहरी निरीक्षक नितेशकुमार सिँह, वडा प्रहरी कार्यालय श्रीपुरका प्रमुख प्रहरी निरीक्षक दिनेश गौतम, प्रहरी निरीक्षक पुरषोत्तम कार्की, प्रहरी निरीक्षक शोभमविक्रम राणा, सामुदायिक सेवा केन्द्र मुर्लीका अध्यक्ष राम सर्राफ, ग्रिनसिटीका पदाधिकारी, सञ्चारकर्मी, सुरक्षाकर्मी लगायतको उपस्थिती रहेको थियो । कार्यक्रमको सहजिकरण व्यवस्थित वीरगञ्ज अभियानका संयोजक दिलिपराज कार्कीले गरेका थिएl
२०७६, २५ फाल्गुन आईतवार ०९:५५
२०७८, ९ कार्तिक मंगलवार १०:४२